I-Nashville Top Christmas / Imicimbi Yeholide
I-united states Tennessee Nashville
by UJan Duke
Izinkambo Zonyaka, Imibukiso, NeziKhanya KaKhisimusi
Kunesizathu sokuthi iNashville ibizwa ngokuthi i-Music City; Kuhlale kuvulekile futhi kugcwele imisebenzi kungakhathaliseki inkathi. Kodwa yindawo yesehlakalo yezenzakalo zemikhosi nemisebenzi ngesikhathi sikaKhisimusi neholide. Izibani, ukuvakashelwa kwezindlu zeholide, nokuhlala e-Gaylord Opryland Hotel phezulu ohlwini lwezinto okufanele zenziwe eNashville ukugubha amaholidi ebusika ngo-2017.
I-Nashville Christmas Lights Tour
Lolu hambo lukuthatha eduze kweNashville ukuze ubone izibani zeholide ezikhangayo bese ubheke kuFranklin, edolobhaneni eliseningizimu yeNashville, idolobha elidumile lapho i-Civil War Battle yaseFranklin yenzeka khona. Uzomisa e-Lotz House, egcwele i-anti-era anti-era antiques and decorated for the season.
Izibani ezikhethekile zeKhisimusi namaHholide
Thola ezinye zezinsuku zokukhanya zeholide ezihle kakhulu kanye nokubukwa kwemikhosi ukuthi indawo yeNashville kufanele inikele. I-Winter Wonderland ye-Chad inesidingo se-Santa, esine-Santa ngokwakhe ethatha izintambo zesifiso sikaKhisimusi, indawo ehamba phambili yokushayela, isiteshi seKhisimusi esingaphezu kuka-350, isitimela sikaKhisimusi, i-snowman yokudansa kanye nokubonisa okuningi kwe-LED. I-Christmas ku-Cumberland inezibani ezingaphezu kwesigidi sikaKhisimusi eziboniswa edolobheni likaMicroregor Park. Izibani zokudansa zikaKhisimusi e-Jellystone Park eNashville ziyojabulisa izingane emndenini wakho, futhi mhlawumbe abadala, nabo.
I-Nashville Holiday Home Tours
Uma usendaweni ye-Nashville, unezindawo eziningi zokuvakashela amakhaya omlando phakathi kwamaholide. Ungabheka indlu yombuso ophezulu, eyindlu yombusi, ngesikhathi sekhaya laseTennessee for the Holidays event. Noma hlola iHermitage Holiday Tour, okuyindlela yokuhamba emlandweni kaMongameli Andrew Jackson ehlotshisiwe ngale nkathi. I-Hermitage i-Davidson County, ngamamayela angu-10 empumalanga yeNashville. I-Historic Home Yuletide Tours e-Nashville Zoo izokunika ithuba ukubona ukuthi ama-Victoriya agubha amaholide eGrassmere Historic Home. Lezi zivakashi zizohlinzeka ngezimpelasonto ezintathu zokuqala ngoDisemba ngo-2017.
I-Gayloard Opryland Hotel Country Country Christmas
Phakathi naso sonke isizini sikaKhisimusi, Ihhotela le-Gaylord Opryland liphethe imicimbi eminingi yeholidini futhi yonke ikhishwe ngamaholide ngokuhlobisa imikhosi futhi kunezigidi ezingaphezu kwezigidi ezikhanyayo ezikhanyayo ezivela ngo-4: 00 kuya phakathi kwamabili kusukela ngoNovemba 10 kuya kuJan. ihotela ukukuthola emoyeni yenkathi ihlanganisa i-Ice equkethe i- "Charlie Brown Christmas," i-Cirque Dreams Holidaze, ne-Diamond Rio Holidays ne-Hits Dinner Show. Futhi akusikho konke. Izingane zingadla ukudla kwasekuseni noCharlie Brown nabangane bakhe, futhi wonke umuntu angahamba nge-ice skating e-rink yehhotela futhi abuke i-skating ice skating eyenziwa ngabachwepheshe. Izingane zingagibela isitimela esincane ngeHholiday Hall futhi zithathwe isithombe sabo noSanta. Hamba ngokuzingela kwe-Build-a-Bear, unama cookies noNksz Claus, noma uhlobisa indlu yokugaya isinkwa. Futhi ngobusuku, bamba imoto eMagnolia Lobby ngokuhamba ngeNashville ekhanyayo, bonke abagqoke amaholide.
I-AM ephezulu ye-AM kanye ne-FM Radio stations
I-Steakhouses e-Nashville Enhle kakhulu neyodwa kakhulu
Uhambo lwezinsuku ezihamba phambili zeNashville
Imikhosi Yosuku Lomsebenzi eNashville
I-Fort Negley yomlando
Amabalazwe ehhotela lase-Nashville's Opryland
Kuyini Okunganakwenzeka Ukudlala Igalofu eS Scottsdale?
Iholide Lasekhaya Lomhlaba 2017 (Usuku LweSikhumbuzo e-Rockville, MD)
Ukuya eMexico ngePet yakho
I-Best Kites 8 Yokuthenga ngo-2018
Izinto ezikhululekile zokwenza ku-Oahu
Izithombe Nezimpawu Ezivelele ZaseSainte-Chapelle
Okumangazayo (futhi Okungekho-Okumangazayo) Izindawo Zakho Ifoni Awukwazi Ukusebenza
I-Christmas Village: Umkhuba eTorrington, CT
I-Top Golf Vacation Destinations eNyakatho-ntshonalanga ye-US
Izintaba eziphakeme ezi-10 zase-Ecuador
Bheka uMathe. Fuji Njengabahlali Yenza: Kusuka Emkhunjini WePirate
Eduze eParis: Vaux-le-Vicomte Chateau